China Battery Heated Gloves S67B orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Eigday
[7.4V 2200MAH Batterie Li-ion azo haverina] Ny fonon-tànana mafana dia misy bateria azo averina lithium-ion. Ny fonon-tanana dia haharitra hatramin'ny 8 ora amin'ny toerana ambany indrindra, 3.5 -4 ora amin'ny toerana antonony ary manodidina ny 3 ora eo amin'ny avo indrindra. Raha mila manao fanatanjahan-tena na miasa any ivelany mandritra ny fotoana lava be ianao dia manolora hevitra hividy bateria fanampiny (amidy misaraka).
[Fampiakarana hetra manarona ny lamosin'ny tanana sy ny rantsantanana 5 mandra-pahatongan'ny rantsan-tànana] ity fonon-tànana elektrika ity dia nohavaozina mba hampiasa singa fanamafisana fibre infrared lavitra mandrakotra ny lamosin'ny tanana sy ny rantsan-tànana.
[3 Heat setting Controller] Ity fonon-tànana mafana ity miaraka amina fikirana hafanana telo samihafa, azonao atao ny manitsy azy mora foana. Ny loko mena LED dia misy toerana avo, ny loko LED fotsy dia fanelanelanana antonony, ny loko LED Blue dia ny fametrahana ambany. Soso-kevitra ny hanitsy ny fipetrahana avo lenta mandritra ny 20 minitra voalohany amin'ny fampiasana azy, avy eo ovaova ny fanelanelanana antonony. Ka afaka mampiasa fotoana lava kokoa any ivelany.
[Soft Breathable Material & with Touch Sensor] Ity fonon-tànana miakatra ity dia nitazona fitaovana softshell tsy tantera-drano. Ao anatiny miaraka amina volon'ondry malefaka sy fitaovana voasesika .Ary koa ny fonon-tànana misy fantsom-pihetsiketsika amin'ny rantsan-tànana dia hiasa amin'ny fitaovana marani-tsaina rehetra. Ity fonon-tànana hafanana ity dia azo antoka fa hanome hafanana mahery sy fampiononana rehefa manao fanatanjahan-tena amin'ny andro mangatsiaka
[Warranty famerenam-bola 100%] Warranty 1 taona.
Tonga lafatra ho an'ny fanatanjahantena ety ivelany: Ny fonon-tànana fanafanana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia mety tsara amin'ny fanatanjahantena an-kalamanjana amin'ny andro mangatsiaka na mangatsiaka, indrindra indrindra ho an'ny snowboarding.
* Controller: Fanaraha-maso ny haavon'ny hafanana telo; Teknolojia Bluetooth avy amin'i App; Teknolojia fanaraha-maso tsy misy tariby; Mizara - mpanara-maso sehatra ho an'ny akanjo;
* Fitaovana pad fanafanana: fibre karbona, Fibre mitambatra, tariby fanafanana firaka.
* Fomban'ny Heating Pad vita amin'ny fonon-tànana - Fantsom-panafana lava kokoa izay nofonosina manodidina ny rantsan-tànana dimy, noho izany dia hafana ihany koa ny tendron'ny rantsan-tànana, tsy amin'ny rantsantanana dimy ihany.
Fanamarihana momba ny orinasa: ISO / SGS / COSTCO GMP Audit
Saron-tànana / ba kiraro nohavaozina: CE / FCC / UL / ROHS
Rafitra fanamainana: CE / FCC / UL / ROHS / PSE
Teo aloha: Palitao Wt004
Manaraka: Fonon-tànana môtô nafanaina amin'ny batterie Miaraka amin'ny CE S28B